Iminyakazo Ehlobene: Uma sisebenzisa i-Free Software, ingabe nathi sibaHacker? | Kusuka kuLinux
Iminyakazo Ehlobene: Uma sisebenzisa i-Free Software, ingabe nathi sibaHacker?
Isoftware yamahhala neLinux Movement ngeHacker Movement
Kuningi osekushiwo ngokwehlukana, lapha kwiBlog nakuGlobal Internet Ecosystem mayelana neFree Software Movement (SL) kanye neHacker Movement. Kodwa-ke, kunabaningi abangawazi ngokuphelele noma ngokwethembeka umlando wakho konke lokhu kuhamba. Futhi bavame ukungabaza, uma omunye ehlobene nomunye, noma uma ephikisana noma ezihlobene.
Ngisho nombuzo othi "Uma sisebenzisa iSoftware yamahhala, singabaHacker?" futhi ingqikithi yayo imvamisa iyinto yokuhlekwa usulu (amaMemes namahlaya) ngabayo nabangaphandle emiphakathini yomibili iminyakazo. Kepha liyini iqiniso ngombuzo onjalo? Yikuphi ukunyakaza okwafika kuqala? Ngabe owokuqala ukuthonye ukudala kanye / noma ukuthuthukiswa kokunye? Le mibuzo neminye sizozama ukuyicacisa ngalokhu okuthobekile okuncane ngale ndaba.
2 Ukunyakaza kweTechno-politiki kanye / noma kweTechno-social
2.1 Umnyakazo WeHacker
2.2 I-Free Software Movement
3 Ubudlelwano phakathi kweFree Software Movement neHacker Movement
Kwezinye izikhathi ku-DesdeLinux Blog sithinte izihloko ezifanayo noma ezihlobene nomqondo owodwa noma womabili, okungukuthi, i-Free Software ne-Hackers. Phakathi kwezindatshana zakamuva kakhulu esingazisho ezivela kimi:
«Imfundo yokugenca: I-Free Software Movement kanye nenqubo Yezemfundo"futhi
«I-Crypto-Anarchism: Isoftware Yamahhala Nezimali Zobuchwepheshe, Ikusasa?".
Kusuka ku-Blogger «ChrisADR» indatshana ibizwa ngokuthi: «Kusho ukuthini uHacker?".
Futhi kwabaningi, ubuhlobo nemvelaphi yakho kokubili «Iminyakazo yeTechno-politiki kanye neTechno-social» kungenzeka kungaziwa. Kodwa-ke, iqiniso ukuthi banemvelaphi efanayo, futhi babelana ngomlando ofanayo ngezinhloso ezifanayo kakhulu, zombili ngokombono wezobuchwepheshe, ezepolitiki nezenhlalo.
Indaba ejwayelekile evame ukuxoxwa kusuka kumvelaphi we-Information and Communication Technologies yamanje (ICT) eminyakeni engaphansi kwengu-100 eyedlule., ikakhulukazi kusukela ekuqaleni kwe- «Internet” kanye nobuchwepheshe obuhambisana nomqondo we “Internet of things”.
Futhi ezinye izinhloso ezivamile ezihlobene nobumfihlo nokuphepha kwabantu ngabanye. Futhi ngekhono lomuntu ngamunye lokufunda, ukufundisa, ukudala, ukwabelana, ukusebenzisa nokuguqula yonke into (kwezobuchwepheshe noma cha) ngaphakathi kokufinyelela kwabo emphakathini wanamuhla. Konke lokhu kwenziwa ngendlela ebanzi kepha kube nomphumela ocacile, osebenzayo futhi omusha, kubantu abaningi kakhulu kunoma iliphi izinga lezenhlalo, ezomnotho nezepolitiki, futhi ngaphandle kokuma emikhawulweni yezwe, ezenkolo nezamasiko.
Futhi ngenhloso eyabiwe yokunikeza isizukulwane esisha sezakhamizi kanye nokunyakaza kwezakhamizi okuthanda kanye / noma ukufeza izinguquko ngokwazo, nasemiphakathini yabo kanye nakuhulumeni. Lokho-ke nakho kuveza izimiso ezintsha nezintsha kumamodeli okuphatha, ukuhlalisana, ukukhiqiza, ezemfundo, ukuqeqesha, ukufunda nokudalwa, ngaphansi kwale migomo ehloniphekile nehloniphekile elandelayo: "Mahhala, Vula, Kufinyeleleke futhi Kuphephe."
Ukunyakaza kweTechno-politiki kanye / noma kweTechno-social
Njengoba i-Humanity ithuthuke kwezobuchwepheshe, idlule ezigabeni ezihlukene, ngamazinga noma amazinga ahlukene, kuya ngesifunda seplanethi, okungukuthi, emazweni noma kumazwekazi. Kusukela ekuguqulweni kwezobuchwepheshe kwezimboni zokugcina kuye ekuguqulweni kwezobuchwepheshe kwidijithali kwakamuva, kuye kwenzeka izinguquko eziningi kwezepolitiki nezenhlalo, zona ezishintshe imithetho yezomnotho namasiko (izisekelo) zabantu kanye / noma yemiphakathi.
Futhi-ke, ngaphambi, ngesikhathi nangemva kwenkathi efanele noma isigaba ngasinye soBuntu, kuye kwavela okuhlukile futhi kuzovela. ukunyakaza okususelwa ekusetshenzisweni kobuchwepheshe kanye nolwazi lwesikhathi ngasinye esifanele. Iminyakazo evelele phakathi kwabanye, ngomthelela wabo ekuthuthukisweni komlando wobuntu. Kepha namuhla, ukunyakaza okuzwakala kakhulu yile:
Ukuqondwa ngomqondo obanzi futhi osebenzayo wokuthi a "UHacker" ngumuntu ophethe kahle ulwazi, ubuciko, inqubo noma ubuchwepheshe kahle kakhulu noma kahle impela, noma abaningi babo ngasikhathi sinye, futhi oqhubeka efuna futhi akwazi ukunqoba noma ukudlula ngokufunda nangokuzijwayeza okuqhubekayo, esivuna yena nabanye, okungukuthi, iningi.
Ngokwalo mqondo kungacatshangelwa ukuthi "Abaduni" bavame ukudideka "namaGenius" enkathi ngayinye, ngakho-ke, bebelokhu bekhona kusukela emsukeni wesintu uqobo. Ukuvumela noma ukuvumela ushintsho nezinguquko ngokusebenzisa intuthuko yezobuchwepheshe etholakala enkathini ngayinye.
Futhi ngokufika kwenkathi yethu yanamuhla ye-ICT (Informatics / Computing) futhi ikakhulukazi i-Intanethi ne-Intanethi yezinto, "Abaduni" banamuhla yilabo abaphumelela nge-ICT, ushintsho olubalulekile noludingekayo kubo.
Ukufeza, nakho, izinguquko kweminye imikhakha ebalulekile njengezeMfundo, ezepolitiki noma ezomnotho, noma ephikisana nemikhakha ethile noma izintshisekelo, ezivame ukulimaza labo abathathelwa noma abaphula umthetho, ngandlela thile.
I-Free Software Movement
Ukuqondwa ngomqondo obanzi futhi osebenzayo njengeSoftware Emahhala kuyo yonke leyo ngxenye yeSoftware eyenziwe ngawodwana noma ngokuhlanganyela ngaphansi kwemigomo ethile eyisisekelo noma inkululeko (4) emine okuyi:
Sebenzisa: Inkululeko yokusebenzisa isoftware ukuze ikwazi ukuyisebenzisa ngokukhululeka kungakhathalekile inhloso yayo.
Isifundo: Inkululeko yokufunda ukuthi isoftware yakhelwe kanjani ukubona ukuthi isebenza kanjani.
Yabelana: Inkululeko yokusabalalisa isoftware ukuqinisekisa ukuthi singasiza abanye ukuthi babe nayo.
Ukuze ube ngcono: Inkululeko yokuguqula izinto zayo, ukuzithuthukisa futhi uzivumelanise nezidingo ezahlukahlukene.
Ukubheka lokhu, umsuka weSL Movement ungalandelwa emuva emuva lapho i-computing yesayensi yanda cishe ama-50s / 60s. Lapho iningi lesoftware lenziwa ngososayensi abafanayo bekhompyutha, izifundiswa namaqembu abacwaningi.
Bonke laba bantu basebenzisana ngokubambisana. Futhi ngosizo lwamaqembu abasebenzisi, basabalalise imikhiqizo yokugcina ukuze bakwazi ukuguqula ukufeza amalungiselelo adingekayo kanye / noma ukuthuthuka ngokuhamba kwesikhathi.
Futhi kungama-80s, lapho ithatha ukwakheka nokubonakala, okuyiyo manje eyi- »Techno-social» Movement for Free Software ne-GNU / Linux. Lokhu kungenxa yokuvela kwenhlangano nomphakathi ozimisele ukwanelisa isidingo sokwenza amaphrojekthi wamahhala futhi amahhala. Ukuze ulwe nokuthuthuka okumangazayo nokuningi kwe-Private Software ekhona.
Ukubuyela emuva esikhathini lapho ukwakhiwa kwamakhompyutha okuqala nesoftware kwakuyisenzo sokubambisana nesokufunda. Kuze kube namuhla, lapho i-SL ne-GNU / Linux Movement ithatha indawo yokuhlonishwa emlandweni wezobuchwepheshe wakamuva womphakathi wanamuhla. Njengoba konke okwenziwe yiSoftware, iFree Software nengxenye enkulu yalokho okuyiMboni Yokuthuthukiswa Kwesoftware kusekelwe ezimisweni zayo (inkululeko).
Lo mnikelo uyinkulumo ebaluleke kakhulu kwezobuchwepheshe-ngamasiko, umuntu ngamunye / ngokuhlanganyela (isakhamuzi) kanye nezentengiselwano (zebhizinisi) ezibalulekile emhlabeni wonke., ngokuhambisana okukhulu kwamanye amazwe ngaphezu kwamanye. Okunye ukunyakaza akubalulekanga kangako futhi kulayini ofanayo neminikelo emikhulu kulokhu, imvamisa iCyberpunks Movement kanye neCryptoanarchist Movement.
Ubudlelwano phakathi kweFree Software Movement neHacker Movement
Ngamafuphi, singasho ukuthi ubudlelwano bungaphezu kokusobala futhi buhambisana. Njengoba iFree Software Movement ivela ngokwemvelo kusuka kuHacker Movement kuma-50s / 60s. Futhi kusekhona kuze kube namuhla njengempendulo yemvelo evela ku-Technological Society.
Impendulo yokungashiywa nge-Commercial, Private and Closed Software (SCPC) ekhona, ukungalawulwa ngendlela efanele noma ukukhohlisa ngokuphelele ngamandla aphakeme emkhakheni wezobuchwepheshe, ezomnotho nezepolitiki.
Futhi-ke, iFree Software Movement inika iHacker Movement izindlela ezifanele zobuchwepheshe beSoftware. Izindlela ezibavumela ukuthi bafeze umsebenzi wokufeza nokugcina inkululeko yesimanjemanje nenkululeko kwezobuchwepheshe engxenyeni enkulu yoMphakathi Wabantu. Ngaphandle kokushaya indiva ukulahleka kwamalungelo akho obumfihlo, ezokuphepha kanye nenkululeko yomuntu ngamunye neyenhlanganyelo.
Isimo sesimanjemanje nenkululeko yezobuchwepheshe esivame ukuba sodwa ngenxa yezindleko eziphakeme, ukulinganiselwa kanye nobubi bokusetshenziswa kwe-SCPC. Ikakhulukazi emiphakathini amazwe abo anganikeli ngamazinga anele emali engenayo noma ingcebo ukuyithola nokuyigcina ibuyekeziwe.
Noma emazweni lapho ohulumeni noma imikhakha yezomnotho bezama ukumodela noma ukulawula uquqaba lwezakhamizi ngokusebenzisa i-SCPC ethile. Izinhlelo noma Amapulatifomu aletha, athola futhi / noma athengise idatha yethu noma ngaphandle kokugunyazwa, ehlasela ubumfihlo bethu noma asebenzise imibono yethu namaqiniso ethu.
Ngemuva kokufunda le ncwadi kanye nezincomo ezinconyiwe ngaphakathi kwe-Blog, sincoma qhubeka ufunde okulandelayo «Izincwadi zedijithali ezihlobene nesihloko seFree Software Movement kanye neHacker Movement»Ku-PDF.
Siyethemba ukuthi yonke le nto izokusiza uqonde ngobukhulu obufanele ubudlelwano phakathi kwale Minyakazo emibili, okungukuthi, phakathi kweFree Software Movement neHacker Movement. Futhi lokho kuyathandeka futhi kunothise umuntu uqobo ngale ndaba iningi. Noma yimuphi umnikelo, ukungabaza noma umbuzo ovelayo, ungangabazi ukuphawula ngokushicilelwa.
Khumbula: «Uma ukholwa futhi / noma usebenzisa iSoftware yamahhala, usuvele uyiHacker, kungani unikela ngezobuchwepheshe ngemizabalazo nje kanye nemibono yezepolitiki nezenhlalo.»- Kuze kube yindatshana elandelayo!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Iminyakazo Ehlobene: Uma sisebenzisa i-Free Software, ingabe nathi sibaHacker?
I-Night Vampire kusho
"Uma wenza futhi / noma usebenzisa iSoftware Yamahhala, usuvele uyiHacker", iMicrosoft nayo izoba yiHacker, ngoba okwamanje inikela kwiFree Software noma cha? Ngisho, angazi, noma ngabe nginephutha? i-xD
Phendula ku-Night Vampire
Omunye u-priori angathi: "Uma ubhekene nomqondo onjalo azikho izingxabano ezingaba khona" kepha iMicrosoft njenge- "Global Commercial Company" empeleni ikhokhela abaningi "uHacker" abaphethe i- "Free Software Arts" ukuze benze lokho abakwenzayo kangcono kakhulu "Khiqiza imali yabanikazi bayo». Ngakho-ke, abayona iHacker Organisation, mhlawumbe i-FSF, iMozilla noma iRed Hat noma iSuse, kepha hhayi iMicrosoft.
ILinux Foundation yethule i-ELISA iphrojekthi yezinhlelo ezinokwethenjelwa kakhulu
IDigiKam 6.0.0 ifika futhi lezi yizindaba zayo